ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက် « MMWeather Information BLOG
ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းတွင် အားကောင်းသော မုန်တိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်
By mmweather.ygn, on October 5th, 2014%
အောက်တိုဘာလ ၆ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ည သန်းခေါင်ကျော်အချိန်မှ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက် နံနက်ပိုင်းအချိန်အတွင်း၊ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်၊ ကော့သောင်းမြို့အရှေ့ဘက် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတွင်၊ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာပြီး၊ ပိုမိုအားကောင်းလာကာ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုအဖြစ်သို့ ၂၄ နာရီအတွင်း ရောက်ရှိလာကာ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်၊ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရရှိသည့် GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင် တွေ့ရှိရသဖြင့် မူလ MMWEather Facebook Page တွင် ခန့်မှန်းထားသည့် အချိန်ထက် ၂ ရက်ခန့် စော၍ မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခု ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်း၌ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ . . . → Read More: ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်းတွင် အားကောင်းသော မုန်တိုင်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နိုင်
2 comments MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းမှ INVEST 98B ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲ
One comment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းသတင်း, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 15W, FIFTEEN, ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း-၃
By mmweather.ygn, on September 4th, 2014%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် စတင်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး စက်တင်ဘာလ(၄)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၉းဝဝ နာရီ၌ ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိရပါသည် – (ပုံ-၁)
တည်နေရာ – 21.39° N, 88.07° E ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း – 285° @ 1 km/h ဗဟိုဖိအား – 1004 hPa
စက်တင်ဘာလ(၄)ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈းဝဝ နာရီတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(at 850hPa)သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနယ်စပ် ကုန်းတွင်း(အနောက်မြောက်ဘက်)သို့ ပြန်လည်ရွေ့လျားဝင်ရောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပြီး GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်း ပုံဖေါ်ချက်များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေအား အောက်ပါအတိုင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းပုံဖေါ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည် (လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပ်ိုင်းတွင် မုန်တိုင်း . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း-၃
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း-၂
By mmweather.ygn, on September 2nd, 2014%
ယနေ့(စက်တင်ဘာလ ၂ ရက် နံနက်ပိုင်း)GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် ည သန်းခေါင်အထိ ကာလအတွင်း၌ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နယ်စပ်အနီး ကမ်းခြေမှ စတင်ကာ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တစ်ခု အစပျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အခြေအနေကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ပုံ-၁ မှ ပုံ-၆ အထိ အဆင့်ဆင့် တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်တွင် အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်လာချိန်၌ လေပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီး လှိုင်းကြီးနိုင်မည့် အခြေအနေရှိပါသဖြင့် မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်နောက်ပိုင်း နေ့စဉ် မိုးလေဝသသတင်း ထုတ်ပြန်ချက်များကို ဆက်လက် . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း-၂
3 comments MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း
By mmweather.ygn, on September 1st, 2014%
စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်(သို့မဟုတ်)လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့် system တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး နေ့လည်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်းတွင် ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်မည့် အခြေအနေကို GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ(Earth image နှင့် WUND image တို့တွင်) တွေ့ရပါသည်။ (ပုံ-၁ / ပုံ-၂)
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်၏ Earth ပုံရိပ်များအရ စက်တင်ဘာလ ၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂းဝဝ နာရီတွင် 18.53° N, 87.76° E တွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မည့် အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း၏ ဗဟိုဖိအား 1000 hPa အထိ ကျဆင်းလာပြီး မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကမ်းနီးပင်လယ်ပြင် – 14.57° N, . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည့် အခြေအနေ ကြိုတင်ခန့်မှန်း
Leaveacomment MODEL-FORECAST, ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 96B စတင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on June 26th, 2014%
ဇွန်လ ၂၅ ရက် ညနေပိုင်းမှ စတင်၍ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မြောက်ပိုင်း၊ စစ်တွေမြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၂၂ဝ ခန့်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 96B ဖြစ်ပ်ါလျှက်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁ဝ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ INVEST 96B သည် 850 hPa(ပေ ၄၅ဝဝ ခန့်)တွင် ဗဟိုဖိအား 1002 hPa ရှိနေပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်အနီး၌ ကုန်းတွင်းသို့ ရွေ့လျားပြီး အားပျော့သွားမည်ဟု GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်တွင် တွေ့ရသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စိုးရိမ်ရသော အခြေအနေမရှိပါ။
INVEST 96B ၏ ညာဘက်ရှိ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 96B စတင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိ
Leaveacomment ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96B, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် Older Entries »